Wallagga Bahaatti miseensotni Raayyaa Ittisa Biyyaa, lama tahuun dubartii gudeedan hidhaan adabaman - BBC News Afaan Oromoo
Wallagga Bahaatti miseensotni Raayyaa Ittisa Biyyaa, lama tahuun dubartii gudeedan hidhaan adabaman
Goodayyaa suuraa ''Loltoonni kunniin dubartii kana bakkee naannoodhuma manasheetti dabareedhaan gudeedan''
Godina Wallaga Bahaa aanaa Saasiggaatti miseensotni Raayyaa Ittisa Biyyaa (RIB) nageenya kabachiisuuf bahan lama tahuun dubartii tokko gudeeduun himataman, hidhaan adabaman.
Miseensotni RIB kunneen gaafa ALI Amajjii 17/2011 (torban sadiin dura) halkan keessaa sa'aatii jahatti mana dubartii miidhamtuu abbaa manaa qabdu deemuun, yakka gudeeddii irratti raawwachuu, Abbaan Alangaa Waajjira Haqaa aanaa Saassigaa obbo Shibbiruu Taaddasaa BBCtti himaniiru.
'Osoon hospitaalatti tajaajila kennaa jiruun reeffa obboleessa abbaa kiyyaa arge'
Miseensotni raayyaa yakkicha raawwatan jedhaman Mahaammad Nuuruu fi Kaffaaloo Taklee miseensa RIB nageenya daangaa Oromiyaa fi Benishaangul kabachiisuuf bobba'aniiti.
Naannittiin to'annoo komaandi postii ittisa biyyaa jala kan jirtu yoo tahu, imaanaa itti kenname dagachuun fedha foonii isaanii guuttachuuf bakka abbaan warraa jirutti dirqisiisanii gudeeduu himan.
Miidhamtuun kun umuriin ishee waggaa 24-25 taha kan jedhe abbaan alangaa, haadha daa'ima tokkoo tahuus himaniiru.
Loltootni kunneen jalqaba mana miidhamtoota kanneenii deemuun, 'namni hin beekamne mana kee bula' jechuun abbaa warraa dhiitanii gadi baasuun, haadhawarraa isaa immoo bakkee naannoodhuma manasheetti dabareedhaan gudeeduu ragaadhaanis mirkaneesineerra jedhan Obbo Shibbiruun.
'Durba fuudhanii cidhaa osoo galanuu ajjeefaman'
''Itoophiyaan yoo jiraatte amma raayyaa ittisa biyyaa keessa jirti''
Yakki loltoota kanaan raawwatame, akkaataa danbii raayyaa ittisa biyyaattis dhaabbaticha waan bakka hin buuneef akkuma yakkamaa kaanii isaan irrattis ol'aantummaan seeeraa mirkanaa'uu qaba jechuun, hoggansi raayyaa ittisaa naannicha jiru shakkamtoota dabarsee nuuf kenne kan jedhan ammoo, Abbaa Adeemsa qorannoo Yakkaa fi murtii Haqaa kennisiisaa aanaa Saasiggaa Saajin Olaanaa Dimbaashaa Tarfaasaati.
Goodayyaa suuraa Yakkamtootni lamaan kunniin mana hidhaa Godina Wallagga Bahaa galaniiru.
Shakkamtootni lamaan himata lamaan kan himataman yoo tahu inni jalqabaa Seera Ittisa Yakkaa 1996 keewwata 620/ 2D darbuun gareen gudeeddii raawwachuu yoo tahu, inni lammaffaan ammoo keewwata 604 fi 605 irra darbuun mana jireenyaa namaa sarbuu kan jedhudha jedhan Obbo Shibbiruun.
Bu'uuruma kanaanis manni murtii aanaa Saassiggaa ragaa bitaa fi mirgaa erga ilaaleen booda himata 1ffaa jalatti shakkamtootni lamaan yakkamtoota tahanii waan argamaniif hidhaa cimaa waggaa 11'n akka adabaman murteesseera.
Himata 2ffaa jalattis shakkamtootni hidhaa cimaa waggaa sadiin akka adabaman murtaa'uun walumaagala hidhaa cimaa waggaa 14'n adabeera.
Yakkamtootni lamaan mana hidhaa Godina Wallagga Bahaa galaniiru.
Saajin Dimbishaa Tarfaasaa hawwaasa naannichaa caalaa namoota hubannaa seeraa qabaniifi seera kabachiisuu qaban tahanii osoo jiranii imaanaa uummataa fi biyyaa dagachuun yakka hojjechuun isaanii yakkicha adda taasisa jedhan.
Miidhamtuun kun mana yaalaatti yaalii kan argatteefi dhukkuboota daddarbaa irraa bilisa tahuu kan himan Obbo Shibbiruun osoo ijaan ilaaluu haadha warraa isaa lama tahanii gudeeduun isaanii miidhaa xiinsammuu abbaa warraas tahe maatii irrati qabaachu danda'as jedhan.
Bakkeewwan garaagaraatti RIB Itoophiyaa yakka gudeeddii fi ajjeechaan yeroo garaagaraa ni komatama.
Ajajaa Ittaanaa Walii Galaa Humna Waraanaa Itoophiyaa Janaraal Birhaanuu Julaa ''Ani as taa'ee uummanni Oromoo namni tokkoyyuu badiisaa malee akka rukutamu akka ajjeefamu, hin barbaadu. Warri ana jala jirummoo hordooffii kootiin hojjeta.
Kanaaf namni kamuu yoo balleesse seeraan ni gaafanna jechuun BBCtti himaniiru.
Miidhaa quunnamtii saalaa
Itoophiyaa: Imala loltootaa gara masaraa mootummaa 'push up'n xumurame
Dhiibbaa fiilmiin 'porn' qabu dhiirota irrattimoo shamarran irratti caalaa hammaataa?